World Cup 2010 and IT Aid - MYSTERY ZILLION
World Cup 2010 and IT Aid
May 2010 edited June 2010 in My Article
MZ member တွေထဲမှာ များသောအားဖြင့် ယောကျာင်္းလေးတွေများလို့ World Cup 2010 မှာ နည်းပညာ ဘယ်လို သုံးထားလဲ ဆိုတဲ့ သတင်းလေးကို share လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
နောက်လ June 11 ဆိုရင် 2010 World Cup စတင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အနှစ်သက်ဆုံး ဆိုတဲ့ အရာတွေထဲက တစ်ခုဆိုရင်လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ပြောမယ်ဆိုရင် ဘောလုံးအပြင် မျိုးချစ်စိတ်၊နိုင်ငံချစ်စိတ်၊ လူမျိုးချစ်စိတ် စတာတွေ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပါ တွေ့ရတက်လို့ ကျန်တဲ့ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေထက် ကြိုက်ပါတယ်။ ခုလာမယ့် World Cup မှာ IT နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေများလုပ်ထားသေးလဲလိုက်ကြည့်ရင်း computerweekly က ဒီ post လေးကိုဖတ်လိုက်မိတယ်။
Event Management System (EMS) ကိုသုံးပြီး World Cup ကိုထိန်းချုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီ system ကို developer
လုပ်ခဲ့တာကတော့ India Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mahindrasatyam ကဖြစ်ပြီး Microsoft .Net ကိုသုံးထားတယ်လို့
သိရပါတယ်။ ဒီ EMS ကိုလွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်ထဲက developer 120 နဲ့ ရေးနေတာ ဖြစ်ပြီး 20 modules ပါဝင်ပြီး ပါဝင်ပါမယ်။
တခြား third-party system များဖြစ်သော Hospitality Management တွေနဲ့လည်း ပေါင်းစပ်ပြီး သုံးနိုင်အောင် design ချထားတာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ system ဟာ Web Based Application တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ဘောပွဲလာကြည့်မယ်သူတွေရဲ့Ticker တွေကို ATM လိုစက်မျိုးတွေမှာ ထုတ်ယူနိုင်တဲ့ အထိပါသုံးထားပါတယ်။ ဆိုလိုတာကဗျာ ခုဘောပွဲကို လာမယ့်သူတွေကနိုင်ငံပေါင်း 208 နိုင်ငံက ပြီးတော့ ရောင်းထားတဲ့ လက်မှတ်ပေါင်းက အစောင်ရေ3သန်းဆိုတော့ တစ်ယောက်ချင်းဆီရဲ့ လက်မှတ်တွေကို မပို့တော့ပဲ Barcode လိုမျိုး code တခုခုကို ထုတ်ပေးထားပါတယ်။ ကြည့်မယ်သူက Johannesburg လေဆိပ်ကို ရောက်ရင်အဲဒီ barcode လိုဟာမျိုးလေးနဲ့ ATM လိုစက်မျိုးမှာ သွားပြီး ကိုယ်ကြည့်မယ့် ပွဲလက်မှတ်ကို ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
တခြားပါသေးတဲ့ module တွေကတော့ ...
1) Accreditation system
World Cup မှာ ပါဝင်ပတ်သတ်မယ့် FIFA ကသူတွေ၊ Players တွေ၊ Medical Staff တွေ၊ Volunteers တွေကို control
လုပ်မယ့် system ဖြစ်ပါတယ်။
2) Volunteer management system
ပြိုင်ပွဲမှာ Volunteer ပေါင်း 130,000 ရှိမှာဖြစ်ပြီ သူတို့တွေရဲ့ Recruitment and Training Function, Time Sheet Function,Matches skills စတာတွေအပြင် payroll function ကိုလည်း ပေါင်းထည့်ထားပါတယ်။
3) Ground transport system
ပြိုင်ပွဲကိုလာရောက်သူတွေရဲ့ သွားလာရေးလွယ်ကူးစေဖို့ လမ်းကြောင်းတွေ၊ အသုံးပြုရမယ့် မော်တော်ယဉ်တွေကို manage လုပ်ပေးမယ့် system လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျင်းပရာနေရာမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ staff တွဲရဲ့ electronic assets ကို management လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
5) Ticketing system
ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့ သလိုပါပဲ ခင်ဗျာ။ ပွဲကြည့်လာ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ Ticket တွေကို management လုပ်ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ EMS ကို World Cup မှာ သုံးမယ့် တကယ် event တွေ၊ multiple users တွေနဲ testing ကို ပြီးခဲ့တဲ့ April ထဲက စပြီး လုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အင်း software ဆိုတာမျိုးကလည်း ဘယ်လောက်ပဲ သေအောင်စမ်းစမ်း real time ကြမှ ထဖောက်တက်တာမျိုးရှိတော့စိတ်ဝင်စားမိပါရဲ့ ... ကျွန်တော် အဖို့ကတော့ World Cup မှာကစားမယ့် ဘောလုံးအသင်း သတင်းတွေအပြင် ဒီ EMS ရဲ့update news တွေကိုပါ စိတ်ဝင်စားမိတာ အမှန်ပါပဲ။
SHAKIRA ဆိုထားတဲ့ World Cup သီချင်းလေး တပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နားထောင်ပြီးတော့ waka waka ဆိုပြီးပါးစပ်ထဲစွဲသွားပါလိမ့်မယ်။
Note: I cannot set with youtube at here, so please see at this link
Credit : http://www.zack-notes.net/joomzack15/readers-conner/world-cup-2010-and-it.html
အရင့် အရင် တုန်း က ရော ဘာစနစ်တွေ သုံး ကြလဲ ဗျ .. ဘာတွေ ပြသနာ ဖြစ်လဲ .. ဘာတွေ ကောင်းလဲ . သိချင်သေးတယ် . . ဗဟုသုတ ရတယ် ဗျာ .. ကျေးဇူး . ကိုဇက်